Pu-Skirt, Bacda Jiifka, Dharka Bannaanka, Glove maqaarka - Besttone
Ku saabsan Besttone
Hebei Besttone Fashion Co., Ltd. oo la aasaasay 2005, waa shirkad xirfadeed oo dhammaystiran oo ganacsi oo isku dhafan cilmi baarista farsamada iyo horumarka, dharka PU, dharka dharka, dharka iyo wax soo saarka dibedda. Shirkaddu waxay leedahay qaabeyn heer sare ah iyo koox soosaarid ah si loo hubiyo isdhexgalka dhow ee ka socda cilmi baarista iyo soo saarista.
waxbadan naga aqriso
Jaakadaha jilicsan ee bikerka
Jaakad Loogu Talo Galay Xaashida Biker
Jaakadaha Dumarka Baaskiil PU
Jaakad baaskiil aan caadi ahayn oo loogu talagalay dumarka
Fadlan naga tag oo 24 saac gudahood ayaan kula soo xiriiri doonnaa
nala soo xiriir Besttone
Abuuritaanka wax soo saarka banaanka cusub ...
Bishii Maajo ee 2020, The Besttone co., Ltd waxay aasaaseen waax cusub- waaxda alaabada ilaalinta dibadda. Bilaabista cilmi-baarista iyo horumarinta alaabada ilaalinta dibadda. 20-kii sano ee la soo dhaafay, ...
Ku darso World Epi ...
Waxaa saameeyay xaalada aduunka ee cudurka faafa ee cusub ee loo yaqaan 'coronavirus epidemic', warshadu waxay ku bilaabaneysaa waji-baarista iyo amarrada maaskaro badeecada si deg deg ah, si aan ugu dadaalno dadaalkeenna ka hortagga cudurrada faafa ee adduunka. Si ...